Tenisy – “Can 2018”: tsy jeren’ny fanjakana mihitsy ireo mpilalao | NewsMada
Tenisy – “Can 2018”: tsy jeren’ny fanjakana mihitsy ireo mpilalao
Par Taratra sur 19/10/2018
Misy taranja asiana lanjany, eo koa anefa ireo tsy ivakiana loha. Izay no azo ilazana ny manjo ny ekipam-pirenena Malagasy, taranja tenisy, amin’izao fotoana izao, handeha hiatrika ny Can 2018. Miantso vonjy nefa tsy misy mpihaino.
“Mahavariana fa samy hanao Can izao ihany, ny Barea sy ny taranja tenisy, nefa ny an’ity taranjan’olon-tokana ity, tsy asian’ny fanjakana lanjany mihitsy. Tsy jereny akory, na dia indray mipi-maso aza”, hoy ny raiamandrenin’ny mpilalao iray, naneho ny alahelony sy ny hagagany fa avy hatrany dia nomena volabe an-tapitrisany, ny baolina kitra, vao tafita, na dia mbola amin’ny taona 2019 aza, ny fiatrehana izany Can, izany.
Ny an’ny tenisy, hotanterahina afaka 19 andro, ny fifaninanana, hatao any Botsoana, ny 5 – 10 novambra, ho avy izao. Raha tsiahivina, mianto-tena ireo mpilalao miatrika izany, araka ny fanapahan-kevitry ny federasiona malagasin’ny tenisy (FMT). Manoloana izany, efa nanao fangatahana tamin’ny fanjakana hatramin’ny fotoana ela, tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny fanatanjahantena sy ny Tafita, ireo mpilalao sy ny raiamandreny, saingy tsy nahazo valin-teny. Ny hany setrin-teny nomena ireo mpilalao dia ny hoe : mianto-tena izay te handray anjara, fa tsy manam-bola ary tsy afaka ny hanohana ny fanjakana.
Tsy tokony hisy fiangarana
“Samy voninahi-pirenena izao no arovana, tokony samy homena fanampiana, na tsy hitovy aza, izay ekipam-pirenena hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena fa tsy asiana tombo sy ala”, hoy hatrany ireo raiamandreny. Raha tsy misy ny fiovana, hanainga ny 3 novambra ho avy izao, ireo mpilalao, ahitana an’i Jacob sy i Patrick ary i Miary Zo, eo amin’ny lehilahy ary i Nantenaina sy i Sariaka, eo amin’ny vehivavy.
“Efa hatry ny ela aho no nanoman-tena, miaraka amin’i Slobodan Grkovic, mpanazatra ary vonona hiatrika ity “Can 2018” ity. Miangavy ny fanjakana, mba hanome tanana ary miantso koa ireo izay vonona hanampy”, hoy i Miary Zo.
Tsy nihambahamba ity mpanazatra an’i Miary Zo ity, nilaza fa manana herijika handrombahana ny fandresena ny Malagasy, indrindra fa ity mpilalao homeny fanazarantena manokana, ity.